Indlela abathengisi abanokuthintela ngayo ilahleko kwindawo yokubonisa | Martech Zone
Hamba ezantsi kwanoma yiphina ivenkile enezitena nodaka kwaye amathuba okuba, uya kubona ishopper ngamehlo abo etshixiwe kwifowuni yabo. Basenokuthelekisa amaxabiso kwiAmazon, babuze umhlobo ngesincomo, okanye bajonge ulwazi malunga nemveliso ethile, kodwa akukho mathandabuzo okuba izixhobo eziphathwayo ziye zaba yinxalenye yamava okuthengisa ngokwasemzimbeni. Ngapha koko, ngaphezulu kweepesenti ezingama-90 zabathengi basebenzisa ii-smartphones ngelixa bethenga.
Ukunyuka kwezixhobo eziphathwayo kukhokelele ekuveleni kwe- ukubonisa, kulapho umthengi ejonga imveliso kwivenkile ebonakalayo kodwa ayithenge kwi-intanethi. Ngokwe-Harris poll, phantse isiqingatha sabathengi—46% - igumbi lokuhlambela. Njengokuba esi senzo siye sanda ngamandla, saqala Intshabalalo nesithokothoko uqikelelo malunga nokuba luya kutshabalalisa njani ukuthengisa izinto ezibonakalayo.
I-apocalypse yokubonisa isenokuba ayikenzeki okwangoku, kodwa oko akuthethi ukuba abathengisi bezinto ezibonakalayo abaphulukani neshishini kwabo bakhuphisana nabo. Abathengi abayi kuyeka ukusebenzisa iifowuni ukubanceda xa bethenga. Abathengi banamhlanje banoxabiso ngamaxabiso Kwaye bafuna ukwazi ukuba bafumana eyona nto intle. Endaweni yokuzama ukungahoyi okanye ukulwa nezixhobo eziselfowuni kwivenkile (eyinto engenamsebenzi), abathengisi kufuneka bazame ukuqinisekisa ukuba xa umthengi esebenzisa isixhobo esiselfowuni, basebenzisa i-app yomthengisi, endaweni yomnye umntu .
Ukucocwa-kwiVenkile yeVenkile esekwe kwiXabiso
Siqhelene ne-Showrooming kunye nokuphambana kwayo Uluhlu lwewebhu - apho umthengi efumana into kwi-intanethi, kodwa ekugqibeleni ayithenge evenkileni. Zombini zixhomekeke kwivenkile yokufumana into kwimeko enye kodwa zenze ukuthenga kwimeko ehluke ngokupheleleyo. Kodwa kuya kuthini ukuba abathengisi baphathe iapps yabo njengolwandiso lwegumbi labo lokubonisa kwaye bakhuthaze abathengi ukuba bazibandakanye neapp xa besesitolo. Njengoko sele kukhankanyiwe apha ngasentla, esona sizathu siphambili sokuzithengisa kukuzibonela kukubona ukuba banokufumana isivumelwano esingcono kumthengisi okhuphisanayo okanye bafumane inkonzo ebhetele. Abathengisi banokuthintela ukuphulukana neshishini ngokudibanisa ukuthelekisa amaxabiso kunye / okanye nexabiso lokuthelekisa amaxabiso kwi-app yabo, ethintela abathengi ekujongeni kwenye indawo ukuba bathenge- nokuba yeyiphi ijelo abayifumanayo.
Umzekelo, ukuthelekisa amaxabiso ngumcimbi omkhulu kubathengisi bezixhobo zombane. Abantu baya evenkileni, bafumana iTV abafuna ukuyithenga, emva koko bajonge kwiAmazon okanye kwiCostco ukubona ukuba bangasifumana isivumelwano esingcono kuyo. Into abangayaziyo kukuba umthengisi unokuba nawo amatikiti, izithembiso kunye nemivuzo yokunyaniseka ekhoyo enokuxabisa umabonwakude ongezantsi kokhuphiswano, into elahlekileyo xa usebenzisa izixhobo zokukhangela ezikhuphisana nabo. Ngaphandle kwazo naziphi na izibonelelo ezithile, umthengisi unokufumana isiqinisekiso somdlalo, kodwa kufuna umntu onxulumene naye ukuba abone ubungqina bokuba imveliso iyafumaneka ngexabiso eliphantsi kukhuphiswano, emva koko kufuneka bagcwalise amaphepha ukuze ixabiso elitsha inokubonakaliswa ngexesha lokuphuma ngaphambi kokuvumela umthengi ukuba athenge. Kukho ukungqubana okukhulu okubandakanyekileyo, kuba iyintoni enokulingana namaxabiso umthengisi anokuyinika i-shopper nangayiphi na indlela. Ngokusebenzisa i-Retailer app ukwenza ukuhambelana kwamaxabiso, yonke inkqubo inokwenzeka kwimizuzwana-i-shopper isebenzisa i-App yomThengisi ukuskena imveliso kwaye ibone ixabiso ebanika lona emva kokuyilinganisa nabakhuphisana nabo kwi-Intanethi, ixabiso elitsha ngokuzenzekelayo liyongezwa kwiprofayile ye-shopper, kwaye yabelwe yona xa begqiba ukuphuma.
Unxibelelwano ngundoqo apha. Nokuba umthengisi unikezela ngexabiso lokuthelekisa amaxabiso, kuyashukuma ukuba abathengi abazi ngayo. Amashishini kufuneka atyale imali ekuphakamiseni ulwazi malunga nokusebenza kwabo kwee -apps ke xa abathengi banomdla kwigumbi lokubonisa, bona Igumbi lokulala endaweni yoko, kwaye uhlale ngaphakathi kwendalo yomthengisi.
Nje ukuba abathengi baziswe kwimeko yokuhamba, mhlawumbi ngokuphumelela kwigumbi lewebhu, zininzi ezinye iindlela abathengisi abanokunxibelelana nazo. Ungacela abathengi ukuba baskene izinto kwaye badlale imiba yamava okuthenga ezivenkileni. Amaxabiso amangalisayo, ukubonelela ngexabiso kwangoko, kunye nokunikezelwa okuguqukayo ngokusekwe kulowo uthengayo kugcina abathengi bonwabile kwaye bezinikele.
Ngapha koko, ukubandakanyeka kweapps kunika abathengisi ukuqonda ngakumbi ukuba ngoobani abathengi. Khawufane ucinge ukuba umsebenzisi uza evenkileni, ahlole into ethile, aze afumane ixabiso elikhethekileyo elitshintsha ngexesha losuku. Ngakumbi abantu abasebenzisa iapps ukuskena izinto, ulwazi ngakumbi abathengisi lufumana kubathengi babo. Kwaye abathengi akufuneki nokuba bathenge ukuskena. Banokufumana amanqaku okunyaniseka, athi emva koko enze uthotho lweemvuthuluka zezinto ngaphakathi kwivenkile. Abathengisi banokusebenzisa le datha ukuqonda ukuba zeziphi izinto ezishushu kwaye abathengi bathenga ntoni. Ukuba kukho into ethile enezinga eliphantsi lokuguqula, umthengisi unokuqhuba kubahlalutyi ukufumanisa ukuba kutheni. Ukuba kukho ixabiso elingcono kumntu okhuphisana naye, umthengisi unokusebenzisa olo lwazi ukunciphisa amaxabiso abo, kwaye ngenxa yoko uhlale ukhuphiswano.
Enye indlela abathengisi abanokuthintela ngayo ilahleko kwindawo yokubonisa kukubopha izinto. Izinto ezisevenkileni zinokubotshwa kunye nezinto ezingahanjiswanga kwivenkile, kodwa oko kuya kuhamba kakuhle naloo nto. Ukuba umntu uthenge ilokhwe, inyanda inokubandakanya izihlangu ezilungelelanisayo ezifumaneka kuphela kwindawo yokugcina izinto esevenkileni. Okanye ukuba umntu uthenge izihlangu, inyanda inokubandakanya iikawusi - ezinye zazo zinokulungiswa ngokupheleleyo kukhetho lomthengi, zize zithunyelwe ekhaya. Iiapps lithuba elihle lokwenza iphakheji efanelekileyo yabathengi, kwaye ngokwenza njalo, ayonyusi intengiso kuphela, kodwa ikwanciphisa iindleko ngokunciphisa ii-SKU eziqhutywa kwivenkile xa kuthelekiswa nendawo yokugcina izinto.
Ngapha koko, iinyanda zinokwandiswa zibandakanya amashishini endawo kunye namaqabane anikezela ngeemveliso ezizodwa kunye neenkonzo ezihamba kakuhle kwimpahla yomthengisi. Cinga ngomthengisi wezemidlalo. Ukuba umthengi uzama ukuthenga iseti yeskis, into yokubopha kwi-app inokunceda ekubakhokeleni ngenkqubo yesigqibo ngokucebisa ukuba loluphi uhlobo lwamathambeka angcono kakhulu kwiskis kwaye iphakamisa neephakeji zempelaveki. Ubuhlakani bomntu wesithathu obuvumela abathengisi ukuba babonelele ngesivumelwano sephakheji kudala umda wokhuphiswano olunge ngakumbi kumthengi kunokuba uthenge into ibenye.
Okokugqibela, abathengisi banokuyiphepha ilahleko yokubonisa igumbi kwaye baphucule izibonelelo zokufika ngokudala inqwelo ye-omnichannel. Ngokusisiseko, inqwelomoya osesitolo kunye nenqwelomoya ekwi-Intanethi kufuneka ibenye. Ukuhamba phakathi kwe-Intanethi kunye nokungaxhunyiwe kwi-intanethi kufuneka kube ngamava angenamthungo kwaye abathengi kufuneka babe nokukhetha ezandleni zabo. Le mihla i-BOPIS (Thenga i-Intanethi kwiVenkile kwiVenkile) wonke umsindo Kodwa amava aqhekeka kanye evenkileni, njengoko abathengi befumana izinto ezongezelelweyo abafuna ukuzithenga, kodwa ngoku kufuneka beme emgceni kabini ukufumana ezo zinto. Ngokufanelekileyo, baya kuba nakho ukuya kwigumbi lewebhu indlela yabo eya kwi-BOPIS, emva koko beze evenkileni kwaye bafumane izinto ezongezelelekileyo abazifunayo, bazongeze kwinqwelo yabo yomzimba exhaswa yi-App yomthengisi, emva koko bagqibe ukuphuma kwe-BOPIS kunye ne-In Gcina izinto ngonqakrazo olunye, kwisikhululo sokuphuma esimanyeneyo.
Ekugqibeleni, Amava abaThengi abaNinzi
Ivenkile ebonakalayo iba ngamava ayo-jonga nje ukuba bangaphi abathengisi abakwi-Intanethi abavula indawo zezitena nodaka. Abathengi bafuna ukubona ukubamba, ukuziva, ukujonga, kunye nevumba leemveliso kwaye ungakhathazeki malunga nejelo. Ukukhuphisana nabadlali be-Intanethi kwixabiso kukhuphiswano ukuya ezantsi. Ukugcina ishishini labo, abathengisi kufuneka babonelele ngokunyanzela ngaphakathi kunye nakumava akwi-intanethi abonelela ngexabiso elaneleyo kunye nokwenza lula ukuba abathengi bangayi kwenye indawo.
tags: Amaxabiso osetyenzisoAmaxabiso asekwe kusetyenzisoindlelaukubophaamava kumakhasimendeumdlalo weevenkilekwenziwa kanjaniAmaxabiso angaphakathi nohleloukulahlekainqwelo ye-omni-yejeloXabisoIxabiso lemvelisoamava okuthengisaukubonisaIlahleko zokubonisa
U-Amitaabh Malhotra ligosa eliyintloko lentengiso le OmnywayIqonga elidityanisiweyo lokuhlawula, imbuyekezo yokunyaniseka kunye nezibonelelo ezikhuthaza abathengi ukuba basebenzise iifowuni eziphathwayo kuyo yonke imiba yohambo lokuthenga.
Ngaba i-Emoji kumxholo wakho weMpembelelo yeMpembelelo ye-imeyile evulekileyo? 🤔
I-LegalZoom isebenzisa ubuGcisa bobuGcisa usebenzisa iVeritone One